Matipi ekusarudza dura nenzira kwayo | ECommerce nhau
Matipi ekusarudza dura nenzira kwayo
Kana tikaronga kutanga a online yekutengesa bhizinesi tinoda kugara tichifunga kuti chii domain uye kuti inotibatsira sei. kutanga internet internet izita rakasarudzika rinoratidza webhusaiti pane internet.
Chinangwa chayo chikuru ndechekuti shandura IP kero mumazita anoyeukwa izvo zvinogona kuwanikwa nyore. Izvi zvinoreva kuti ine mutoro kune chero munhu akabatana neinternet kuwana iyo webhusaiti yavanoda, semuenzaniso mitiendaexample.com.es
1 Maseru anowanzo kuve nezvikamu zviviri:
1.1 Sangano remazita:
1.2 Rudzi rwesangano:
1.3 Nzvimbo yenzvimbo:
Maseru anowanzo kuve nezvikamu zviviri:
Izvi zvinowanzo kutakura iyo zita rechiratidzo chedu kana chitoro. Kubva pakutanga, zvinokurudzirwa kuti rive izwi idzva kana risinganzwisisike nemutsara kuti usavhiringidzike nemapeji akafanana kana kumwe kutendeuka. Zvinokurudzirwa zvakare kuti iwe ugadzire tsvaga usati wasimbisa dura rako kuve nechokwadi chekuti chemahara kana chisina hukama nechimwe chinhu.
Ndicho chirevo chinoreva iyo mhando yewebhu peji. Anonyanya kuzivikanwa ndeaya .com, .net, .org, .edu. Mapeji ane zvinangwa zvekushambadzira anofanirwa kushandisa dura
Zvichienderana nenzvimbo yakatangira peji rega rega, izvi zvinogona kutora iyo kupera .es, .us, .uk, kana iyo inoenderana nenyika ipi neipi. Izvi zvinonyanya kubatsira kwatiri kana masevhisi edu achipiwa munyika dzakasiyana uye isu tine mitengo, kukwidziridzwa kana katarogu yakasiyana kune yega Nenzira iyi tinokwanisa kupa kutarisisa kune edu vatengi vepasi rese.
Nyoresa domeini zvakafanana nemaitiro ekunyoresa kuzivikanwa kwekambani. Pane zvakawanda zvingasarudzwa pamhepo zvinopa sevhisi iyi. Kutanga tinofanira tarisa kuwanikwa kwesizinda uye wozadza rumwe ruzivo rwemunhu nezvemunhu anotarisira domain. Chekupedzisira, isu tinofanirwa kubhadhara iyo annuity uye kumirira kuti chirongwa chiitwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » Matipi ekusarudza dura nenzira kwayo
7 Nzira dzeKupinda muEcommerce
Kubhadhara muzvikamu mu e-commerce